Ity doodle miorina amin'ny Google ity dia manazava ny halaviran'ny fiaraha-monina | Famoronana an-tserasera
Google dia niavaka manokana noho ny antony maro. Ary amin'ity indray mitoraka ity dia mpampiasa iray izay mamadika ny doodle ho pejy fikarohana ary izany no fomba mahomby indrindra hanehoana amin'ny olona iray ny iray amin'ireo fepetra lehibe azo raisina mba hampijanonana ny fiparitahan'ny COVID-19.
Tsy mila miteny na inona na inona isika satria manazava ny zava-drehetra ny doodle. Raha milaza fotsiny fa tsy maintsy metatra vitsivitsy miala amin'ny olon-kafa isika rehefa terena hanao izany, ity mpampiasa reddit ity dia manazava izany amin'ny fomba mahomby indrindra amin'ny alàlan'ny fandavana ireo litera mandrafitra ny sary famantarana.
Doodle izay mifandray haingana iray amin'ireo fepetra mahomby indrindra hisorohana ny fihanaky ny coronavirus manerana an'izao tontolo izao. Ny fanalavirana sosialy ilaina mba hisorohana ny olona iray izay asymptomatika tsy hiharan'olona izay mbola tsy nifandray tamin'iza na iza tamin'ny COVID-19.
Izany hoe, na dia tsy manana soritr'aretina aza ianao dia tena ilaina ny mampihataka ny tenanao amin'ny olona tsy eo amin'ny sehatry ny tranonao izany. Miresaka ny tsy hahita olona any an-trano izahay, hialana amin'ny famenoana ao amin'ny fivarotana lehibe, na hisorohana olona mifanena aminao eny an-dalana rehefa mankaiza.
Ese ny fanalavirana ara-tsosialy dia mazava tsara amin'ny hevitra lehibe an'ny mpampiasa ity ary azo raisina tsara amin'ny G lehibe izy io mba hisarihana ny sain'izay mbola tsy nandray am-po ny zava-mitranga eto ambonin'ny planeta.
La tantaran'ny google doodles Fotoana fohy ary hankalazana ny nahaterahan'ny olona malaza amin'ny sehatry ny siansa na zavakanto sasany, naka ny motera fikarohana ry zalahy avy amin'ny Google hametrahana azy. Ho hitantsika raha toa ka gaga antsika izy ireo mandritra ireo andro sy herinandro ireo amin'ny iray. Raha te hahalala ianao ho an'ny mpanakanto mikarakara azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Google doodle manalavitra ny sosialy nataon'i Google ho an'ny mpampiasa
Ny BBC dia manome effets feo 16 ho an'ny rehetra maimaim-poana